Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Imfundo yeSizwe yeJografi: Ukubhankisha nge-Egypt
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Education
Isifundo seSizwe seJografi, uphawu lweQela leCengage, namhlanje libhengeze ukuba bangene kubambiswano lwexesha elide kunye noMphathiswa Wezemfundo wase-Egypt, ukubonelela ngekharityhulamu yebanga le-4-6 kubafundi abamalunga nezigidi ezisixhenxe e-Egypt.
Ubambiswano lweSizwe lweJografi, oluza kuhambisa izinto zokuprinta nezidijithali, ziyinxalenye yombono kaMphathiswa wezeMfundo uGqirha Tarek Shawki wemfundo ye-2.0 umbono - utshintsho olupheleleyo kwinkqubo yemfundo yase-Egypt ngo-2030 - exhaswa kukugxila kwizakhono zobomi, ubuchule, ubuchule ukucinga nokuzingca nge-Egypt. Ngaphezulu kwe Izigidi ezingama-20 zabafundi ababhalisileyokwi-K-12, i-Egypt inenkqubo yemfundo enkulu eMiddle East naseAfrika. Nangona kunjalo, imfundo e-Egypt khange ihambelane ngokwembali nokulungiselela abafundi nge-21st Izakhono zenkulungwane zokusombulula iingxaki ziyafuneka ekwakheni amakhondo emisebenzi anentsingiselo.
"Sifuna abafundi bafundele ubomi babo bonke, hayi uviwo," utshilo uGqirha Tarek Shawki, Umphathiswa Wezemfundo ne-technical. “Besifuna iqabane elinokusinceda sixhobise abafundi ngezakhono zomsebenzi wexesha elizayo kunye nempumelelo ebomini, ukuqala besebancinci. Sikhethe iNational Geographic Learning kuba umxholo, uyilo, kunye nendlela esizifundisa ngayo zizisa ukufunda ebomini. ”
Ukuxhasa inguqu kwezemfundo yase-Egypt, i-National Geographic Learning ihambisa ikharityhulam yesiNgesi, iZifundo zeNtlalo, iZakhono zoMsebenzi kunye neTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano (ICT). Izakhono zomsebenzi kunye ne-ICT zibaluleke kakhulu kumbono we-Education 2.0 eYiphutha, njengoko bazisa abantwana abaneminyaka eli-10-12 ubudala kuluhlu olubanzi lwemisebenzi abangazi nto ingako ngayo, kunye nezakhono abanokuzifuna kwimpumelelo yexesha elizayo kwezo nkalo. .
"Umphathiswa Wezemfundo wase-Egypt uthathe indlela yokusika ekwenzeni ikharityhulam enyanzelisayo, ukuqinisekisa ukuba isizukulwana esilandelayo siphuhlisa ulwazi, izakhono zobomi, kunye neenqobo zempumelelo kwikamva," utshilo u-Alexander Broich, uMongameli we-Cengage Global Businesses kunye noMphathi Jikelele woLwimi lwesiNgesi. Ukufundisa. “KwiQela leCengage, sikholelwa ngamandla kwisidingo sokulungiselela abafundi ubomi nomsebenzi. Injongo yethu kukuqinisekisa ukuba abafundi abayikulungela iqondo nje, kodwa balungele umsebenzi. I-Ofisi yoMphathiswa Wezemfundo wase-Egypt inxibelelene kakhulu nale mishini, kwaye siyazingca ngokunceda ukuzisa ukufunda, ngokusebenzela uGqirha Shawki.
Ukongeza ekunikezeleni ikharityhulam yesiNgesi njengenxalenye yobambiswano, umxholo we-ICT uya kubonelelwa ngesiNgesi nangesiArabhu ukunceda ukuqhubela phambili ukufunda kwabafundi isiNgesi njengenxalenye yemfundo yabo yaseprayimari.
“Ulwazi lwesiNgesi nalo ludlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abafundi ukuba balungele ingqesho,” uqhubeke watsho uBroich. "Sikholelwa ekubeni isiqingatha sehlabathi siza kube sithetha okanye siza kufunda isiNgesi ngowama-2030 kuba isiNgesi esiqeqeshekileyo sisango eliya kwikhondo lomsebenzi othembisayo kwizigidi zabantu kwihlabathi jikelele."
Ikharityhulamu inezinto ezikhuthazayo zase-Egypt kunye ne-National Geographic Explorers ukunceda ukubandakanya, ukukhuthaza kunye nokufaka ukuzingca kubafundi base-Egypt.
"I-National Geographic inembali ende yokukhanyisa nokukhusela ummangaliso wehlabathi lethu," utshilo uFred Hiebert, iArchaeologist e-Residence yeNational Geographic Society, kunye nelungu le-National Geographic Learning's Advisory Council kubambiswano loMphathiswa wase-Egypt. “Amabali ngefuthe lembali kunye nenkcubeko yabantu kwiplanethi yethu bayinxalenye yelifa elilodwa likaNational Geographic. Akukho mzekelo ubalaseleyo woku ngaphandle kokuchazwa kwe-Egypt, enye yezona nkcubeko zakudala zaziwayo. ”
U-Hiebert uqhubeke wathi, "Olu bambiswano lithuba elihle kwi-National Geographic yokunyusa amazwi nezazinzulu zase-Egypt."
Zonke izikolo zaseprayimari kulo lonke elase-Egypt zaqala ukusebenzisa ikharityhulam yeSizwe yokuFunda ngeJografi nge-9 ka-Okthobha, ukuqala ngebanga lesine kulo nyaka wokufunda, nokwandisa ukuya kwibanga lesihlanu kunye nelesithandathu kule minyaka mibini izayo.
Malunga nokuFunda kweSizwe kweJografi
Isifundo seLizwe seJografi, uphawu lweQela leCengage, ngumshicileli ophambili kwimfundo yoLwimi lwesiNgesi kunye neemarike zemfundo zamabanga aphakamileyo kwihlabathi liphela. KuFundo lweLizwe lweJografi, sikholelwa ekubeni umfundi ozibandakanyayo nokhuthazayo uya kuba yimpumelelo, kwaye siyile izixhobo zethu ngendlela enomdla kakhulu yokubalisa amabali eyindlela elungileyo yokucela olu nxibelelwano. Ukuze ufunde okungakumbi, ndwendwela: ellngl.com.
Malunga neQela leCengage
Iqela leCengage, inkampani yetekhnoloji yemfundo kwihlabathi liphela ekhonza izigidi zabafundi, ibonelela ngeemveliso ezifikelelekayo, ezisemgangathweni kunye neenkonzo ezixhobisa abafundi ngezakhono kunye nobuchule obufunekayo ukuze balungele umsebenzi. Ngaphezulu kweminyaka eli-100, senze amandla kunye novuyo lokufunda ngomxholo othembekileyo, obandakanyekayo, kwaye ngoku, amaqonga edijithali adityanisiweyo.